Ukurisayikilisha - Imisebenzi yobugcisa | Imisebenzi yezandla (Iphepha 2)
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokoma ngokulula izilayi zeorenji okanye ...
Ikhadibhodi isipha seentyatyambo, sigqibelele ukufumana inkcukacha
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza esi siqhuma seentyatyambo sihle, sonke ...
Iindawo ezigqibeleleyo zokuhombisa ekwindla
Molweni nonke! Ukwindla kuyeza kunye nayo, kunokwenzeka ukuba sifuna ukutshintsha umhombiso wendlu nge ...
Imisebenzi yobugcisa yokurisayikilisha yokubuyisela iiholide
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kukunika imibono emi-5 yobugcisa bokurisayikilisha ogqibeleleyo ...
Iisepha ezenziwe ngesandla
Kule mveliso siza kukufundisa ukuba wenze iisepha ezenziwe ngesandla kwaye zilula, zifunde ukuphinda usebenzise iisepha ekhaya.
Imisebenzi yezandla ezi-5 zokuzonwabisa nokuzonwabisa kunye nokudlala nazo kamva
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje sikulethela ubugcisa obu-5 bokuhlala ixesha lokuphumla. Singonwaba…
Amakhandlela anevumba elimnandi
Fumanisa indlela yokwenza amakhandlela amahle anevumba elityityiweyo. Luyinto yoqobo kunye nobugcisa obukhethekileyo bokuhombisa kunye nokunika njengezipho. Tyhila
Izilwanyana ezihlekisayo ezineentonga zomthi
Fumanisa ukuba ungazonwabisa njani kunye nezilwanyana zasekuqaleni ngeentonga zomthi. Siphinde sakha intshontsho, intlanzi kunye nedayinaso.
Iseti yehupu zabantwana
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza lo mdlalo wamakhonkco nabantwana ...
Imisebenzi yobugcisa emi-5 eyenziwe ngeentsimbi zokunxiba ezenziwe ngomthi
Molweni nonke! Namhlanje sikulethela izindululo ezi-5 zobugcisa eziza kwenziwa ngeentsimbi zokunxiba. Sizakufuna…
Imisebenzi eluncedo yasekhaya, egqibeleleyo yokuthatha ixesha kwiiyure ezishushu
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kuthetha ngendlela yokwenza ubugcisa obahlukileyo ngaphandle kokonwabisa ...
Ipendenti yeHippie eyenziwe ngeCD
Esi siphenduli bubugcisa obugqwesileyo kubo bonke abo bantwana abafuna ukufunda ukusebenzisa uboya. Bazokwazi ukuzonwabisa kwaye bonwabe.
Isakhelo sokugcina amacici
Le freyimu yamacici isetyenzisiweyo yeyona ndlela ilungileyo yokuba namacici akho anemibala kunye nentsusa kwindawo ebonakalayo.
Abondli beentaka ngeetoti ezihlaziyiweyo
Yonwaba ukuphinda uphinde usebenzise iitoti ezimbini zokutya ukuze ukwazi ukwenza ukutya kweentaka, ngezinto ezimbalwa kwaye kulula ukwenza.
Incwadana yokubhalela evuthiweyo eneentonga
Fumanisa ukuba ungayenza njani incwadana yokubhala yevini ngentonga ezilula zomthi kunye nepeyinti encinci ye-acrylic eya kuthi inike inkangeleko entle.
Ientyatyambo ezi-7 zenziwe ngephepha okanye igwebu lerabha
Molweni nonke! Namhlanje sikuzisa ngeendlela ezi-7 ezahlukeneyo zokwenza iintyatyambo. Unokufumana izinto ezahlukeneyo ezinje ngephepha, iphepha ...
Iipirati ezihlekisayo zokunika amaqela
Fumanisa indlela yokwenza iipirati zokuzonwabisa ngendlela elula kakhulu ngeentonga, ikhadibhodi kunye neengqekembe zemali ukuze zinike izipho.
Indlela yengca yokudada
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba yenziwe njani le ndlela intle yengca ukuze ifike apho ...
Tshatisa XNUMX nezilwanyana
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba yenziwa njani eyantlandlolo ibe mithathu-ngokulandelelana usebenzisa izixhobo ...
Imisebenzi yobugcisa emi-5 yokwenza ukuzonwabisa ngeyona yure zishushu
Molweni nonke! Ihlobo lifikile kwaye kunye nobushushu, ke iiyure ezimbalwa zibhetele ...
Amagorha amakhulu enziwe ngekhadibhodi
Funda ukuphinda usebenzise ezinye iityhubhu zekhadibhodi ezinobume obuhle kakhulu. Kungumsebenzi wobugcisa oza kuthandwa ngabancinci ekhaya
Ikomityi enephepha lokuya ngasese
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza le mug elula ngekhadibhodi ...
Iimilo zejiyometri zokufaka isitampu ngemiqulu yephepha langasese
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza imilo yejiyometri ukuya kwisitampu. Ubugcisa obuhamba ...
5 yezandla ezigqibeleleyo zangaphandle kwimozulu eshushu
Molweni nonke! Ngemozulu elungileyo sifuna ukuba kwiindawo ezingaphandle kwezindlu zethu, ke sikuzisela ...
4 iingcinga zobugcisa ukunika izinto zethu ithuba lesibini
Molweni nonke! Namhlanje siza kukunika izimvo ezininzi ukuze uphinde usebenzise ezinye izinto esinazo ekhaya kwaye ...
Owl kunye neekorkorks
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba sisenza njani esi sikhova sihle nge-cork. Yi…
Ihagu elula yebhanki yokurisayikilisha uhlobo lomgubo wobisi olunako
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza le bhanki yehagu ngendlela elula kakhulu. Yi…
Imisebenzi yezandla yokufunda
Molweni nonke! Namhlanje siza kubona izimvo ezininzi zobugcisa bokufunda, zilungele ukwenza nabantwana ...
Umnini wekhandlela kunye neebhola zeepistachio
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje sikuphathela indlela yoqobo yokusebenzisa iigobolondo zepistachio….
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza umdlalo omnandi: umdlalo we ...
Ngebhubhu enkulu yekhadibhodi sinokuphinda siyijonge kwakhona ukuze yenze induku yemvula. Yenziwe ngezinto ezilula nezifikelelekayo.
Ikhadibhodi kunye nomvundla wekhadibhodi
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona enye indlela yokwenza umvundla ...
Intyatyambo nefolokhwe yeplastiki
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza le ntyatyambo ngemfoloko yeplastiki….
Fumanisa indlela yokwenza la makhosazana amnandi ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe ezinjengekhadibhodi, ipeyinti kunye noboya. Uya kuyithanda kuba bayathandeka.
Ikati yomgcini wepensile
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba yenziwe njani le mbiza yeepensile emile kakuhle ...
Umthi wasentwasahlobo, kulula kwaye kulula ukwenza nabantwana
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza ubugcisa entwasahlobo, umthi weentyatyambo one ...
Iziphatho zezibane ezinamathini ahlaziyiweyo
Sikubonisa indlela emnandi kakhulu kunye neyentsusa yokuba uphinde uphinde usebenzise iitoti zakho kwaye ubanike olo thintelo lweediliya ngentambo yejute. Fumanisa!
5 yezandla zokurisayikilisha iibhotile zeglasi kunye neejagi
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kubona ukuba sinokuphinda sisebenzise njani iibhotile zeglasi kunye nejar ngokwenza ...
Ibhotile ehonjiswe ngeentambo noboya
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba sinika njani ubomi besibini kwezi bhotile ze ...
Amakhowa aneebhokisi zeqanda
Molweni nonke! Kule mveliso siza kubona indlela yokwenza eli mushroom libomvu libomvu kunye neebhokisi zeqanda. Yi…
Jellyfish enekomityi yeqanda
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza ijellyfish entle usebenzisa ikhadibhodi ye ...
Whale ngekomityi yeqanda
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza lo mnenga mhle ngento elula ...
Lungisa ibhegi exobukayo
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza into eyahlukileyo, siza kukufundisa iqhinga lokuphepha ...
6 Imisebenzi yezilwanyana
Molweni nonke! Kweli nqaku siza kuphakamisa imisebenzi yezilwanyana ezi-6 yokwenza nayiphi na imva kwemini kunye nokuchitha ...
Iikati ezenziwe ngeetyhubhu zekhadibhodi
Enkosi kwiityhubhu zekhadibhodi sinokwenza iikati ezintle ukuze zisebenze njengephenyane kwaye sigcine iipeyinti kunye neepeni.
I-6 yokurisayikilisha ubugcisa ukuqala unyaka
Molweni nonke! Siqala unyaka omtsha kwaye yeyiphi indlela ebhetele yokuqalisa ukuphinda isebenze kwakhona kunye nokwenza ulwazi kwabancinci ...
Imisebenzi yezandla ezi-4 ezigqibeleleyo zokuqalisa unyaka nabantwana
Molweni nonke! Ngokufika konyaka omtsha, yeyiphi indlela ebhetele yokuqalisa ukwenza ubugcisa kunye nabantwana ...
Unombombiya onebhokisi yeqanda
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokwenza le penguin ihlekisayo ngebhokisi yeqanda….
Intaka encinci eneekomityi zamaqanda
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba singayenza njani intaka okanye intshontsho ...
I-Monster eneekomityi zeqanda
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba sisenza njani esi silo sihlekisayo ngeebhokisi zeqanda….
Intlanzi elula eneekomityi zeqanda kunye nekhadibhodi
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza intlanzi elula ngeekomityi zamaqanda kunye nekhadibhodi. Igqibelele…
Iphazili emile okwenja
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje sikuphathela indlela yokwenza iphazili emile njengenja. Yi…
Qeqesha ngekhadibhodi erisayikilishwe
Senze uloliwe othandekayo ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe kunye nengcinga encinci. Ngezixhobo ezinokuphinda zisetyenziswe uya kufunda ukwenza izinto ezintle
Iiplanethi ezenziwe ngokutsha
Ezi moya zipholile kakhulu! Ngezixhobo ezimbalwa singenza iinqwelomoya ezilula eziza kuthandwa ngabancinci….
Iimpawu zomthwalo owenziwe ngabantwana
Ungaphuthelwa yile mveliso elula yokwenza nabantwana. Zizi-tag ezilula zemithwalo eziyila kunye nokuba unokusebenzisa kakhulu.
I-vase e-Recycled yokwenza nabantwana
Ungaphuthelwa yile mveliso ukwenza i-vase encinci enokuphinda uyenze kunye nabantwana abancinci.
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza ezi kliphu zomtshato zintle, zilungele ukuhombisa ...
Imisebenzi yobugcisa eyi-6 yokusebenzisa iicorks zeebhotile
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje siza kukunika iingcinga zobugcisa ezi-6 zokusebenzisa iikhokho kwakhona ...
Ibhokisi yoluvo yokwenza nabantwana
Sikuxelela indlela yokwenza ibhokisi yemvakalelo ngendlela elula ukuze ukwazi ukuyenza nabantwana, kwaye udlale nabo ukwahlula izinto!
Imidlalo yokuncamathela yabantwana
Uya kuwuthanda lo msebenzi wobugcisa wenziwe ngeeseti zemithi, ukuze abantwana badlale endlwini. Uya kuphuhlisa izakhono zakho zomdlalo
Iibhukumaki ezi-6 ezigqibeleleyo zokunika
Molweni nonke! Kwinqaku lanamhlanje sikulethela ukuhlanganiswa kweebhukumaka ezi-6 ezigqibeleleyo zokwenza ekhaya ...
Isakhelo sokujonga iifoto
Ngolu bugcisa siza kufunda indlela yokwenza isakhelo sefoto sokuvuna. Fumanisa ukuba ungayenza njani le ndlela yokurisayikilisha kunye nomxube weepeyinti zesanti.
Imijukujelwa yendawo eneetyhubhu zekhadibhodi
Phinda ulisebenzise ixesha lakho ngokwenza iirokethi ezimbini zentsusa zangaphandle kwiityhubhu zekhadibhodi. Umsebenzi wobugcisa onokuwenza nabantwana.
Ihashe elilula elinamakhokho kunye noboya
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kubona ukuba lenziwa njani na eli hashe lihle kwaye lilula ...
Ibhokisi emile ye-Unicorn
Funda ukuba ungayenza njani ibhokisi onokuphinda uyisebenzise kwaye uyiguqule ibe yinto eyothusayo ekwimo ye-unicorn. Kumnandi kwaye kungoqobo.
Imisebenzi yezandla ezi-4 zokuphinda zisetyenziswe ukuphinda sizisebenzise yonke imihla
Molweni nonke! Siya sazi ngakumbi ngokubaluleka kokurisayikilisha okanye nokunciphisa ukusetyenziswa ...
Umququzeleli wedesika enekhadibhodi
Funda ngale mveliso ukuphinda usebenzise ezinye iityhubhu zekhadibhodi. Ngabo sikwazile ukwenza umququzeleli wedesika yoqobo kunye nolonwabo.
Yenza umsonto weT-shirt wobugcisa ngeempahla ezindala
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza amalaphu ezinto zobugcisa ngeempahla ezindala. Yindlela…
I-octopus elula enephepha lephepha langasese
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kuyenza le octopus ngephepha langasese. Yi…
Ukutyala ngomgqomo omdala wenkunkuma
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza lo mtyali mhle ngebhasikithi endala yenkunkuma. Ifanelekile…
Islingling yokwenza nabantwana
Ungaphoswa yile mveliso yobugcisa kulula ukuyenza nabantwana, kuba ukongeza ekwenzeni islingling baya kuba nakho ukudlala ngendalo yabo.
Iibhaluni okanye iimpompo zamanzi ezenziwe ekhaya nezisetyenziswayo
Molweni nonke! Ngoku ukuba iintsuku ezishushu ziyasondela ... Yintoni ebhetele kunokuba nemfazwe ibhaluni okanye ...
Iintyatyambo ezineebhokisi zeqanda
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza iintyatyambo ngeebhokisi zeqanda. Ubugcisa ...
Maze ibhokisi yokwenza nabantwana
Ungaphoswa yile bhokisi ye-maze yenziwe ngabantwana kwaye emva kokuba uyenzile, babe nexesha lokuzonwabisa.
Ibhokisi yeewadi yoonodoli
Ngebhokisi yekhadibhodi siye sakwazi ukuphinda sisebenzise kwakhona. Siqulunqe ubume bayo sakha ikhabethe loonodoli kwaye ke sigcina zonke iimpahla zabo.
Iibhokisi ezincinci zokuphumelela
Kule mveliso sifundisa indlela yokwenza iibhokisi zokuthweswa izidanga. Indlela yokubhiyozela usuku olukhethekileyo ngokwenza izipho zoqobo.
Umbungu omibalabala onokuwenza nabantwana
Ungaphuthelwa yile mveliso yobugcisa ilula, kwaye ikhawulezayo ukuyenza nabantwana. Baya konwaba kakhulu kuba beya kukwazi ukuyenza ngezandla zabo.
Ibhokisi yentloko ekuphinda kusetyenziswe ibhokisi yentsimbi
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kuphinda sisebenzise ibhokisi yentsimbi ukwenza ibhokisi yee-headphone….
Iidomino ezinemibala enamaqhuqhuva endlebe
Obu bubugcisa obulula ukwenza kunye neendlebe zeendlebe kwaye abantwana baya kuyithanda ... yidomino ekhethekileyo!
Ibhokisi yezihlangu ephinde yenziwa ngokutsha yamantombazana
Ngaba uyazi ukuba unokwenza izimvo ezimangalisayo ngebhokisi yezihlangu? Ewe, ibisisindululo salo msebenzi wobugcisa, funda ukuphinda usebenzise kwakhona ngendlela emnandi
Funda ukongeza ngokuthwala obu bugcisa
Ukufunda ukongeza ngelixa uthwele kunokuba lula kakhulu ngale ncwadana yokwenza nabantwana. Sikubonisa ukuba ungayenza njani, kulula kakhulu!
Indebe yeqanda yokudlala amanqaku
Ngekhadibhodi yeqanda engenanto, unokwenza ubugcisa bokuba abantwana badlale nabo, kulula kwaye kumnandi!
Mini banjo yokwenza nabantwana
Ungaphuthelwa yile mveliso elula yokwenza isixhobo esincinci kwaye abantwana bakho badlale ngayo bakugqiba.
Izinto zokudlala ezinomdla kubantwana
Kubugcisa banamhlanje sinebhotile yeemvakalelo kunye nebhakethi leplastiki elineeribhoni ukuze abantwana bonwabe
Iityhubhu zekhadibhodi ezimile njengamaIndiya #yomequedoencasa
Kubugcisa banamhlanje sinamaIndiya ahlekisayo, amnandi kakhulu kwaye anemibala. Zenziwe ngeetyhubhu zekhadibhodi ezenziwe ngokutsha kunye nemibala emnandi.
Amakhadibhodi ekhadibhodi aneekomityi zeqanda zabantwana #yomequedoencasa
Ungaphoswa yile mveliso yenziwe ngabantwana apho baya kuba nexesha elimnandi kakhulu ... baya kwenza amadada eekhadibhodi ahlekisayo!
Iingxowa zeelekese ezimile okwe-Unicorn
Funda indlela yokwenza ubugcisa obubini ukugcina iilekese. Ingxowa kunye nebhokisi enebhubhu yekhadibhodi emile njenge-unicorn.
Iimaski zabantwana ngaphandle komatshini wokuthunga #yomequedoencasa
Ubugcisa obukufundisayo ukwenza iimaski ezimnandi kakhulu zabancinci. Funda indlela yokwenza ngesandla kwaye ngaphandle komatshini wokuthunga.
Uluvo loqobo ngezikhephe zePringles #yomequedoencasa
Ubugcisa banamhlanje bucebisa umbono omnandi wokuphinda usetyenziswe kwakhona. Ngezi ntsuku zinzima sinokuphinda sisebenzise ingcinga yethu yokuguqula ...
Ipeni ngebhotile yeplastiki
Ungaphoswa yile mveliso kunye nebhotile yeplastiki! Unokwenza ipensile erisayikilishwe ngokwakho okanye uyinike nabani na oyifunayo.
Inyoka kunye ne-corks
Molo! Kubugcisa banamhlanje siza kuyenza le nyoka ihlekisayo nge-corks. Unokwenza ubungakanani obukhethileyo ...
Inja ihlafuna ngeempahla ezindala
Molweni nonke! Kule mveliso siza kwenza ukuba inja ilume ngeempahla ezindala, yindlela egqibeleleyo ...
Indebe ibhrashi yamazinyo ukuphinda isebenze ingqayi yeglasi
Molweni nonke! Kule mveliso siza kwenza ibhotile yamazinyo emnandi ngokurisayikisha imbiza ye ...
I-Knot mesh yokuthenga iziqhamo
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza amaqhina amaqhina ukuthenga iziqhamo ngokurisayikilisha enye ...
Senza izitya ze-cork ezahlukeneyo ze-3
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza izitya ezintathu zeesepha. Ngamnye wahlukile. Ba kakhulu…
Isongo kunye neekork
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza isongo nge-corks, ijongeka intle kwaye ...
Ibhasikithi enentambo yejute yokuxhoma
Enye indlela yokwenza umbono wokuhombisa ukuba umbono wakho kukwenza into yoqobo. Sinokwenza iibhasikiti ngentambo yejute, elula kakhulu kwaye ekhawulezayo.
Kulula ukwenza itshathi yothando
Le mveliso ifuna izinto ezimbalwa kwaye kulula kakhulu ukuyenza ... Ukuba ufuna ukunika into entle umntu okhethekileyo, olu luvo lolwakho!
Isibane sabantwana esineekomityi zeplastiki
Ngeiglasi ezimbalwa ndikwazile ukwenza isibane ngomnwe wobuntwana. Sisiphakamiso esihle kakhulu kwiqela elincinci labantwana
Ibhotile yokukhanyisa ehonjisiweyo
Ungaphoswa yile bhotile yezibane ukuhombisa ikhaya lakho. Kulula kakhulu ukwenza kwaye uya kufuna kuphela imizuzu emibini kwiziphumo ezilungileyo.
Senza ibhasikidi ngentambo yejute
Siza kufunda ukwenza ibhasikidi ngentambo yejuti. Uya kudinga ibhokisi yekhadibhodi kunye nentambo yejute esiza kuyitywina ngesilicone eshushu.
Umhlobiso weKrisimesi omile okwiSaka
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza uhombiso oluhle lweKrisimesi olumile njengengxowa….
Phinda usebenzise ibhokisi yezihlangu ngendlela yoqobo
Ukuba uthanda ukuphinda usebenzise kwakhona apha unendlela yoqobo yokwenza, kufuneka ube nebhokisi yezihlangu ukuze ukwazi ukwenza ibhokisi
Ibhokisi yepati yokurisayikilisha ibhokisi yobisi kunye namalaphu
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza ibhegi yepati ngokurisayikilisha ibhokisi yobisi ...
Imisebenzi yezandla ezi-3 yokuxhoma iKrisimesi
Izinto ezintathu ezimnandi kakhulu kunye nezentsusa zokwenza kunye nokuxhoma kumthi weKrisimesi. Inokwenziwa nabantwana kuba kulula kakhulu.
Ubugcisa bePopsicle Stick
Iindlela ezine zokwenza ubugcisa obulula kakhulu usebenzisa izinti zepapsicle. Ziyakhawuleza ukwenza kwaye kulula kakhulu ukuba zinokwenziwa nabantwana
Isiphatho sekhandlela seHalloween esimile njengomama
Molweni nonke! Kule mveliso siza kukubonisa indlela yokwenza isibane esilula kakhulu seHalloween. Uyafuna ukubona…
Phinda usebenzise ibhokisi kunye ne-decoupage
Ukuba uthanda ukuphinda usetyenziswe kwakhona, nantsi indlela efanelekileyo yokuhombisa ibhokisi yekhadibhodi. Siza uyihombisa ngepeyinti ye-acrylic kwaye sisebenzise i-decoupage.
Isilumko sisebenzisa kwakhona umlingo weplastikhi
Molweni nonke! Kubugcisa banamhlanje siza kuyenza le pendende intle sisebenzise umlingo weplastiki njengesiseko se ...
Senza ipleyiti yokuchonga izinja ngeplastiki yomlingo
Molo! Kubugcisa banamhlanje siza kwenza i-tag yokuchonga izinja ezisebenzisa umlingo weplastiki kwi-tuper ...
Yenza i-kaleidoscope kwibhotile ye-Pringles
Yiba nesibindi sokwenza i-kaleidoscope usebenzisa ityhubhu yeePringles kunye nezinto onokuba nazo. Kulula kwaye kungowokuqala ukwenza nabantwana.
Iibhegi ezininzi zisetyenziselwa ukuphinda zisetyenziswe ezinye iibhulukhwe
Kubugcisa banamhlanje siza kwenza ibhegi enezinto ezininzi ngokurisayikilisha ibhlukhwe. Yindlela elula neluncedo ...
Umbono wesipho sokugqibela
Kule mveliso siza kukunika umbono wokuba wenze isipho sokugqibela. Siza kusebenzisa izinto esinazo ...
Hlafuna Uhlobo lokudlala inja
Kubugcisa banamhlanje siza kuphinda sisebenzise iikawusi kunye nezikipa ukuze senze uhlobo lokudlala lwezinja lwala maxesha….
Ibhokisi yobucwebe bemisesane, indlela entle kwaye elula yokuzigcina
Kule mveliso siza kwenza ibhokisi yezacholo ukugcina amakhonkco ngendlela enocwangco. Ngale nto siza kuyisebenzisa kwakhona ...
Iphenyane elidadayo kunye necorks kunye nerabha yeva
Kule mveliso siza kwenza isikhephe esidadayo, silungele abantwana ukuba badlale ebhafini, ...
Indwangu yetafile nganye yokurisayikilisha ilaphu letheyibhile
Ngaba unazo iitafile zerabha ezonakeleyo? Ngokuqinisekileyo kukho indawo enokusetyenziselwa ukwenza indwangu yetafile ...
Iimbiza ezixhonyiweyo neebhokisi zeebisi eziphindiweyo
Iimbiza ezixhonyiweyo zilungele zombini ngaphakathi nangaphandle, ungaphoswa yile ndlela yokwenza iimbiza ezixhonywe kwiibhokisi zobisi!
Senza isikhova ngemisetyenzana yephepha langasese
Namhlanje siza kwenza omnye umsebenzi wokurisayikilisha. Ngeli xesha siza kwenza amaphepha okurisayikilisha isikhova ...
Senza ivazi ngokusebenzisa kwakhona ibhotile yeglasi
Ngemozulu elungileyo sifuna ukuphinda sihombise, kuba oku siza kwenza ivazi ngokusebenzisa kwakhona ibhotile yeglasi. Ukufezekisa ngokwakho okanye njengeentyatyambo zeentyatyambo
Senza izibane ezimbini zokuhombisa ngeebhotile zeglasi kunye nezibane ezikhokelwayo
Senza izibane ezimbini zokuhombisa ezineebhotile zeglasi kunye nezibane ezikhokelwayo, zilula kakhulu kwaye ziyintsusa, ukongeza ekwenzeni naliphi na igumbi elamkelekileyo ngakumbi.
Senza imbonakalo yomhlaba kwisitya seentyatyambo esaphukileyo
Ngaba unayo imbiza yeentyatyambo eyaphukileyo? Ungayilahli, sinokwenza izimbiza zeentyatyambo ngayo, njengalo mhlaba okwimbiza yeentyatyambo eyaphukileyo.
Uyenza njani ibhokisi yobucwebe ngaphandle kweenkuni kunye neelekisi
Ingcaciso yendlela yokwenza ibhokisi yezacholo yobugcisa usebenzisa izinti zomkhenkce kunye nephepha elincinci lomthi. Ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyenza.
Uyenza njani "intonga yamanzi" ngaphandle kwephepha kunye neoodles
Ingcaciso yendlela yokwenza intonga yamanzi. Ubugcisa bokwenza nabantwana kwesi sixhobo somculo wemvelaphi yakudala kakhulu.
Uyenza njani intlanzi ngeeCD ezisetyenzisiweyo kunye nephepha le-crepe
Ingcaciso ngendlela yokusebenzisa iiCD zomculo ukwenza iintlanzi ezincinci zokuhombisa ngephepha le-crepe. Ubugcisa obulula kunye nokukhawuleza ukwenza.
Ibhokisi eyenziwe ngeenkuni zomkhenkce zokuhombisa
Ubugcisa bokwenza ibhokisi encinci eyenziwe ngomthi eyenziwe ngezinti zomkhenkce. Ilungele izinto zokurisayikilisha, kwaye njengezinto zokuhombisa.
Inkxaso yasekhaya yokurekhoda iividiyo ngeselula yakho
Siza kwenza inkxaso eyenziwe ekhaya yeselfowuni esinokurekhoda kuyo iividiyo ezivela kwii-engile ezahlukeneyo ngokurisayikilisha kwakhona ikhadibhodi yebhokisi yobisi.
Ipeni eneendiza zeplastiki kunye nephepha langasese
Ingcaciso yendlela yokwenza ipensile eneendiza kunye nomqulu wephepha langasese ngokulula nangokukhawuleza. Umsebenzi wobugcisa wabantwana.
Isakhelo sefoto enekhadibhodi yebhokisi yokutya
Inkqubo yokwenza ifreyimu ngekhadibhodi kunye nekhadibhodi. Ubugcisa obunemathiriyeli ebuyiselweyo efumaneka ekhaya, ekhawulezayo ukuyenza.
Uyenza njani umthi wesundu kuluhlu lwephepha kunye neendiza
Ingcaciso yendlela yokwenza umthi wesundu kunye nomqolo wephepha langasese kunye neengca. Kukulungele ukunika ubumnandi kunye nomnandi ekhaya.
Uyenza njani ingqayi yeentyatyambo ngokurisayikilisha ibhotile yesepha
Inkcazo kunye nenkqubo ngeefoto zendlela yokwenza ingqayi yeentyatyambo ngokurisayikilisha ibhotile yesepha, ukuthatha ithuba lokuphatha ukwenza ifaneli yokunkcenkceshela.
Uyenza njani into yokuhombisa kakuhle ngaphandle kweepopsicle stick
Ingcaciso yendlela yokwenza into yokuhombisa kakuhle ngeentonga ze-ice cream ezinokusebenza njenge-vase kunye nokuhombisa. Ubugcisa obulungele abantwana!
Imisebenzi yobugcisa yePasika yabantwana abaneetyhubhu zekhadibhodi
I-Ista sele izakufika kwaye oko kuthetha ukuba kufuneka silungiselele ubugcisa be-Ista ukubhiyozela lo mhla. Zininzi izimvo, kodwa kwividiyo yanamhlanje sifunda indlela yokwenza ubugcisa be-Ista ezintathu ngeetyhubhu zekhadibhodi, ezilungele ukwenziwa ekhaya nabantwana abancinci, baya kubathanda.
Isembozo sebhedi yenja ngamanye amaphepha amadala angathungwanga
Siza kwenza ikhava yokulala inja, ngokulula nangokukhawuleza, sisebenzisa iphepha elidala kwaye ngaphandle kwesidingo sokuthunga.
Uyenza njani i-polyhedra ngokurisayikilisha iiCD zomculo
Inkcazo yendlela yokwenza i-polyhedra yobugcisa, ukuthatha ithuba lokuphinda usebenzise iiCD zomculo. Ilungele ukuhonjiswa kwekhaya okanye njengesipho!
Senza inja ngokususa iphepha langasese
Siza kwenza ubugcisa obulula, unodoli omile njengenja ukuphinda usete umqulu wephepha langasese kunye ...
Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona iimpahla ezibanzi: siguqula ilokhwe enkulu ibe yenye ehambelana nenani
Amaxesha amaninzi kuyenzeka ukuba sinelokhwe okanye isikipa esisinike sona, okanye ngexesha ebesilithanda kodwa ...
Senza incwadana ngokubuyisela kwakhona umqulu wephepha langasese
Kulunge ngakumbi ukudibanisa ubugcisa kunye nokurisayikilisha! Kule posi siza kwenza incwadana ukuba iphinde isetyenziselwe ukuphinda isebenze kwakhona umqulu wephepha langasese kunye nezinto esinazo ekhaya.
Indlela yokwenza umququzeleli wepenisi yokumakisha ngokurisayikilisha iinkonkxa
Kule khokelo, ndikubonisa indlela yokwenza umakishi kunye nomququzeleli wepeyinti ngokusebenzisa iitoti. Iyahombisa kakhulu kwaye ngaphezulu kwayo yonke kuninzi kakhulu.Kulesi sifundo ndiza kukufundisa indlela yokwenza umququzeleli wokumakisha kunye nepeyinti ngokusebenzisa kwakhona iitoti, ngokulula nangokukhawuleza.
INDLELA YOKWENZA AMALAMU NGOKUTSHINTSHA Iibhotile zeplastikhi
Kwesi sifundo ndikuzisela umbono wokuphinda usebenzise iibhotile zeplastiki kwaye uzijike zibe zizibane zokuhombisa. Zilula, ziyakhawuleza kwaye azibizi. Kule tutorial ndikuzisela umbono wokuphinda usebenzise iibhotile zeplastiki uzenze izibane zokuhombisa. Kulula, ziyakhawuleza kwaye azibizi ukwenza.
INDLELA YOKWENZA UMLAWULI WEQHELE NGOKUTSHINTSHA iiCD
Kwesi sifundo ndikuzisela umbono wokuba uphinde uphinde usebenzise iiCD kunye neeDVD zakho ezindala. Kumnandi ukwenza nabantwana kwaye banokuhombisa amagumbi abo.Kule khokelo ndikulethela umbono wokuba uphinde uphinde usebenzise iiCD kunye neeDVD zakho ezindala ngokwenza umququzeleli wesele.
Izimvo ezikhawulezayo nezilula zokuhombisa ngokurisayikilisha iingqayi zeglasi
Kwesi sifundo ndikuzisela imibono emibini ukuze uphinde usebenzise iingqayi zakho zeglasi kwaye wenze izinto ezithile zokuhombisa onokuthi uzenze ngokwezifiso zakho Kolu qeqesho ndikuzisele imibono emibini ukuze uphinde usebenzise iingqayi zakho zeglasi kwaye wenze izinto ezithile zokuhombisa.
IINKCUKACHA EZI-3 ZOKUHLAWULELWA KWETYhubhu YEBHODI YEBHODI
Kule tutorial ndizisa iimbono ezi-3 zokuphinda zisetyenziswe kwakhona iityhubhu zekhadibhodi. Unokwenza ipensile entle, iipakeji zezipho kunye neshelufu yedesika.
Iibhukhmakhi zomthi ezinobumba kunye nombala
Funda ukuba ungayenza njani le bhukumaki kwiincwadi zakho eseholideyini ngobugcisa bokubhala, ungenza uyilo oluthanda kakhulu.
RECYCLE CARDBOARD BOXES NEEGLAS JARS UKWENZA IBHODI YOKUTHUTHA
Kwesi sifundo ndikuzisela umbono wokuphinda usebenzise iikhadibhodi kunye neengqayi zeglasi ngaxeshanye. Siza kwenza i-vase okanye i-vase yeentyatyambo kunye ne-mobile holder.
QHUBELA AMANYE AMAKHULU EGLASI KWIIMPAWU ZOKUGUQULA
Kwesi sifundo ndikuzisela umbono wokuba uphinde usebenzise iingqayi zeglasi kwaye uzijike zibe ziziphatho ezintle zeekhandlela ezihombisa nasiphi na isithuba imini nobusuku.
Uyisebenzisa kanjani kwakhona ingqayi yobisi ukwenza ivazi entle.
Ungayisebenzisa njani ingqayi yobisi ukwenza ivasi entle. Ungayisebenzisa kwindawo ephambili okanye ukuhombisa iitafile ezimnandi, ifotokopi.
IIMBONO EZILULA 3 ZOKUQINISEKISA IINKHUKU ZENKONZO-INYATHELO NGENYATHELO
Kule tutorial ndikulethele izimvo ezi-3 zokuphinda usebenzise kwakhona iitoti kwaye uzijike zibe zizinto ezintle zokuhombisa ikhaya lakho. Ibhokisi yezicubu, isiphatho sekhandlela kunye nevasi ejingayo oya kuthi uyinike ubomi besibini kwezo zinto beziza kulahlwa.
IINKCUKACHA EZI-3 ZOKUQINISEKISA IINGXOXO ZE-SHAMPOO NOKWENZA IIVASI
Kule khokelo ndikuzisela imibono emi-3 elula yokuphinda usebenzise iitoti ze-shampoo kwaye uzenze zibe ziivazi ezintle. Ngamnye unendlela eyahlukileyo ukuze ufunde iindlela ezahlukeneyo zokwenza izinto ezintsha onokuzisebenzisa kuyilo ezahlukeneyo.
Uyenza njani umnini indebe ngokurisayikilisha iCD.
Makhe sibone indlela yokwenza umnikazi wekomityi ngokurisayikilisha iCD. Imalunga nokusebenzisa ezo diski zingasasebenziyo kwaye uzinike usetyenziso olwahluke ngokupheleleyo.
IIMBONO EZILULA ZISETYENZISWA KWIJEAN OKANYE IIJEWU
Kule tutorial ndikuzisa izimvo ezi-3 ukuze uphinde usebenzise ijee okanye ijean yakho ngokulula nangokuyilayo. Zezobugcisa eziluncedo kakhulu onokuthi ubanike ubuchukumisi bakho ngokongeza izinto zokuhombisa ozithanda kakhulu.
IINKCUKACHA ezi-3 ZOKWENZA IINTSHUKUMO ZOKUHLAZIYWA KWEBHODI YEBHODI
Kolu qeqesho ndikuphathela izimvo ezi-3 zokwenza iintyatyambo ngokurisayikilisha kwakhona iityhubhu zekhadibhodi kwiphepha langasese okanye iphepha lasekhitshini. Bonwabile kakhulu kwaye kufanelekile ukwenza nabantwana, babayeke babapeyinte ngemibala abayithanda kakhulu.
RECYCLE CANS KUNYE WENZE ABANYE ABAPHATHI BEPENISI NJENGABO
Phinda usebenzise kwakhona iinkonkxa kwaye wenze ezinye zeepensile ezifana nezi! Ukuba uyabathanda, ndiza kukuxelela ukuba kulula kakhulu ukuzenza kwaye ukongeza ekubeni umhle uyakuzihlaziya.
IINKCUKACHA EZI-3 ZOKUHLAWULELWA KWEZIJWA ZAMATAPHA - UKUHLAZIYWA KWENDALO
Kolu qeqesho ndikuphathela izimvo ezi-3 zokuphinda usebenzise iingqayi zeetapile okanye iityhubhu zekhadibhodi apho iichips zeetapile zivela khona. Sele ubabonile amaxesha amaninzi kwaye kulula ukufumana.
IINKCUKACHA EZI-3 ZOKUBUYEKISA IINGXOWA ZEPlastiki
Kwesi sifundo ndikuzisela imibono emi-3 ukuze ukwazi ukwenza izinto ezahlukeneyo ngokurisayikilisha iingxowa zeplastiki. Kulula kakhulu ukuzenza kodwa ziluncedo kakhulu. Uya kufunda ukwenza ityala ngeglasi, ibhegi yabantwana kunye neentsimbi.
Iimbono ezi-3 zokuphinda usebenzise kwakhona iityhubhu zekhadibhodi kunye nokwenza izihombiso zeKrisimesi
Kwesi sifundo ndikubonisa izimvo ezi-3 ukuze uphinde usebenzise iityhubhu zekhadibhodi kwaye uzijike zibe zizihombiso ezintle zeKrisimesi.
Uyenza njani incwadi yamanqaku kwincwadi yamanqaku yesikolo
indlela yokwenza incwadi yamanqaku kwincwadi yamanqaku yesikolo kwaye uyitshintshe ngokupheleleyo ukubonakala kwayo, akukho mntu uya kuthi uyifumene apho.
IINKCUKACHA EZISETYENZISWA ZOKUSETYENZISWA KWEHOLO
Kule tutorial ndikuzisa izimvo ezi-3 zokwenza ubugcisa beHalloween kusetyenziswa izinto eziphinda zenziwe kwakhona. Ilula kwaye ayibizi.
Guqula ukujonga incwadana yakho yakudala, unike olokuchukumisa luchaza ukuba loluphi.
Guqula ukujonga incwadana yakho yakudala inike olona chukumiso luchonga olona longezelelekileyo, ukongeza ekurisayikilizeni uza kuba noyilo olutsha.
Izimvo ezi-5 zokuphinda usebenzise iingqayi zeglasi- UKUHLAZIYWA KWAKHONA
5 izimvo zokuphinda usebenzise iingqayi zeglasi okanye iingqayi. Into esidibana nayo phantse yonke imihla kwaye ngokuqinisekileyo uzilahlile uninzi lwazo.
Uyenza njani indlu yeentaka ngokurisayikilisha iibhotile zeplastiki
Kule tutorial ndikubonisa ukuba uyila njani indlu yeentaka ngezinto ezikhoyo ngokulula kunye nokuphinda usebenzise iibhotile zeplastiki.
Uyenza njani into yokuphinda usebenzise umququzeleli wepeyinti
Kule khokelo ndikubonisa indlela yokwenza umququzeleli wepeyinti zeembiza. Kulula kakhulu ukwenza kwaye isebenzise izinto ezirisayikilishwe.
Uyenza njani ibhokisi yeelekese ngephepha le-crepe ukulungiselela amaqela kunye nemibhiyozo
Kule khokelo, ndikubonisa indlela yokwenza iibhokisi zeelekese ezilula kwaye ezingabizi kakhulu, ezifanele amaqela, imihla yokuzalwa, ishawa yabantwana, umthendeleko ...
UMargarita wenziwe ngeekepusi zeplastiki ukuze anike
Funda ukuba ungayenza njani le margarita ngokuphinda usebenzise iminqwazi yeplastiki ukuhombisa ikona yendlu yakho kwaye uyenze ibonakale intle kwaye inobuhlobo.
Uyenza njani into yokubamba ikhandlela kwakhona
Kule mveliso sinokubona ukuba singasenza njani isiphatho sekhandlela esisetyenzisiweyo, kusetyenziswa ityhuna engenanto enesiphumo esimangalisayo.
Uyenza njani ibhotile ekhanyayo nge-decoupage yeKrisimesi
Kule tutorial ndikufundisa ukuba uyenza njani ibhotile ekhanyayo, usebenzisa iibhotile zeglasi ukubenza bajonge le Krisimesi.
Uyenza njani umthi weKrisimesi wokuhombisa ngeenkuni kunye nekhadibhodi
Kwesi sifundo ndiza kukubonisa indlela yokwenza umthi weKrisimesi onexabiso eliphantsi kakhulu nolwanamhlanje. Yintsusa kwaye ungayenza ngokulula ngokwakho.
Uyibuyisela kanjani kwakhona kwifenitshala
Hlaziya ikhaya lakho ngale khokelo malunga nendlela yokuphinda usebenze ifenitshala. Umsebenzi olula kakhulu kunye nexabiso eliphantsi ukwenza.
Umnini wekhandlela ukuphinda asebenzise kwakhona ikani
Kule khokelo ndikubonisa inyathelo ngenyathelo ukwenza umnini wekhandlela ukuphinda asebenzise itoti yokulondolozwa. Ukongeza kokurisayikilisha kwakhona sinokuzihombisa ngamanyathelo ambalwa.
Isacholo somqala esineepilisi zekofu
Funda indlela yokusebenzisa kwakhona iifomsile zekofu kwaye uziguqulele kule pendenti ixabisekileyo ukuyidibanisa nayo nayiphi na impahla onayo.
Uyenza njani i-Newspaper Bowls
Kule tutorial uya kufunda ukuba ungazenza njani izitya zeprintprint ngokulula nangabizi. Zineziphumo ezilungileyo kakhulu, ziyamelana kwaye azibizi.
Inqwelo moya eneentonga zomthi
Ngeentonga zomthi, yakha le nqwelomoya iyintsusa kwaye kulula kakhulu ukuba abantwana abancinci endlwini babe nexesha elimnandi.
Isiphatho sekhandlela esimnandi
Masibone indlela yokwenza isiphatho sekhandlela esinamakha obu bugcisa kulula kakhulu ukwenza kwaye yinto entle kakhulu yokuhombisa:
Uyenza njani intambo yomqala
Ukuba ufuna ukunxiba ubucwebe bentsusa obahluke kwaphela, ungaphoswa sesi sifundo, apho siza kukubonisa indlela yokwenza umgexo wentambo.
Itoti enokurisayikilisheka ukuze iphinde isetyenziswe
Namhlanje ndikuzisela ubugcisa obuza kuthi, ukongeza kwinto yokurisayikilisha, buya kuba luncedo kakhulu kumsebenzi wethu wokuthunga: siza kubona ukuba siyiguqula njani inkonxa ehlaziyiweyo ukuba ibe sisikhonkwane, ngendlela elula nelula.
Ungazenza njani iintliziyo ngokwenza kwakhona ijeans
Uyisebenzisa kanjani kwakhona ijeans yakho kwaye wenze iintliziyo zokuhombisa ngokulula nangokukhawuleza.
Izibane ezinemibala ziphinda zisebenzise iingqayi zeglasi
Funda ukwenza izibane ezinemibala ngokusebenzisa iingqayi zeglasi. Ukugqibelela kwimimandla kunye nokukhanya kweqela.
Iincwadana ezinemathiriyeli ezinokuphinda zisetyenziswe
Kubugcisa banamhlanje siza kubona indlela yokutshintsha iibhokisi zesiriyeli zibe ziincwadana ezintle.
Hombisa ibhokisi yeziqhamo.
Kule mveliso sikubonisa ukuba, ukuqala kwibhokisi yamaqunube, sinokuyitshintsha imbonakalo yayo isebenze njengomhombiso.
Iikawusi zesinxibo segqwirha
Kule tutorial ungabona ukuba ungaziguqula njani ezinye iithayithi zibe zisitokhwe zempahla yobugqwirha eyenziwe zizo ngenkcubeko eninzi.
Isongo sendandatho yesongo
Isifundo sokuphinda usebenzise amakhonkco esoda. I-DIY elula onokuyisebenzisa kwizinto ezingenakubalwa: isongo, isacholo somqala, ibhanti, njl.
Umnqwazi weentsiba ze-DIY
Yenza umnqwazi ngokwezixhobo ezimbalwa kakhulu. Kule DIY siza kuyisebenzisa kwakhona umnqwazi kwaye siyinike ubomi besibini.
Iimbadada ze-DIY ngentambo
Inqaku lobugcisa apho siza kufunda khona ukuphinda sisebenzise iimbadada kwaye sibanike ubomi besibini ngengcinga encinci kwaye ngendlela yoqobo.
I-Clutch eyenziwe nge-placemat
Yenza eyakho iklatshi okanye ibhegi ngendlela elula emhlabeni. Yenza i-clutch usebenzisa i-placemat, i-glue ye-sealer, kunye ne-flap ornament
I-Anklet eyenziwe ngelaphu
Inqaku le-DIY eliqulathe isifundo sendlela yokwenza i-anklet ngokurisayikilisha intambo yelaphu okanye ihempe endala. Kulula, kumnandi kwaye kuhle.
Ibhotile yeglasi epeyintiweyo ngee-watercolor
Isifundo sokuphinda usebenzise ibhotile kwaye uyihombise ngepeyinti zamanzi esiza kuzilungisa nge-varnish yeglasi.
Khuphula ingubo kwisiketi nakwisityalo ngaphezulu
Phinda uhlaziye ingubo yomzimba kwiqhekeza ezimbini. Zenzele isiqhamo sesityalo kunye nesiketi ngaphandle kwexesha kwaye ngokulula.
Iitoti eziphindiweyo zokudlala nazo
Amathini anokudlala ngawo, ewe! Ngeinki encinci kunye nesiphawuli sinokuphinda sisebenzise ezinye iinkonkxa zokugcina kwaye sizenze into yokudlala emnandi
Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona iiflethi zamantombazana
Ukuphinda sisebenzise kwakhona iiflethi ezigugileyo sinokuqhubeka sizisebenzisa sizenze ngobuninzi kwaye sizinxibe nazo ngokwezifiso zethu ngokubanika umnwe wethu
Ukuhonjiswa kwebhokisi ye-Ferrero rocher ngamaphephancwadi
Kule nqaku sikubonisa indlela yokuhombisa ibhokisi ye-Ferrero rocher ukwenza uhlobo lwebhokisi yobucwebe okanye indawo yokugcina izinto zakho zexabiso.
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza ii-strollers zabantwana kwiibhokisi zekhadibhodi. Indlela yokufundisa abantwana ukuba baphinde basebenzise kwakhona.
Ihagu yebhanki yabantwana
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza i-piggy bank elula kubantwana abanekhadibhodi nje. Ngale ndlela, banokuyifaka kwaye bayikhuphe nangaliphi na ixesha abafuna ngalo.
Ibhokisi ye-Ferrero rocher ehonjiswe ngoSuku lweValentine
Kweli nqaku sikubonisa ukuba ungayisebenzisa kanjani iteyiphu ye-washi eneempawu zeValentine ukuhombisa ibhokisi ye-Ferrero. Isipho esikhetheke kakhulu.
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungazonwabisa njani ngee-watermelon coasters ngephepha lekhokho. 100% yokuyila.
Ibhegi yoyilo eneejean
Kule nqaku sikubonisa isikhwama sokuyila kunye esihle esenziwe ngejee ezindala. Umbono omkhulu wokuphinda usebenzise kwakhona.
Iselfowuni kunye nezigaba zeNyanga
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iselfowuni eyahlukileyo enezigaba ezahlukeneyo zeNyanga, umhombiso obalaseleyo kwigumbi.
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungazisebenzisa njani izinto zokumisa i-cork ukwenza umququzeleli onomdla ukuze akwazi ukuxhoma iiglasi ngendlela enocwangco.
Amajoni ahlobisayo aneentonga ze-ice cream
Ngexesha lasehlotyeni kulungile ukugcina iincindi zomkhenkce ukwenza ubugcisa obunje ngala majoni okuhombisa nawonwabisayo ebantwaneni.
Amacici enziwe ngeesoda
Inqaku le-DIY malunga nendlela yokuphinda usebenzise amanye amacwecwe esoda kwaye uwaguqule abe ngamacici ngamanyathelo ambalwa alula oza kuwafumana kwesi sifundo.
Imbiza yokwenza kunye nebhotile erisayikilishwe
Isifundo sendlela yokwenza imodeli kwibhotile yeplastiki ngobushushu bentsimbi ukufumana ibhotile yokugcina izithambiso esizisebenzisa yonke imihla.
Ngubani Ngubani Umdlalo ngentando yakho
Kweli nqaku sikufundisa ukuba ungawenza njani umdlalo weentsomi zabantwana zezona zinto zenzelwe wena ngezandla zethu. Ngubani lowo.
Iimagnethi ezinokumisa izikhonkwane
Kweli nqaku sikubonisa indlela isitovu sekhokho esilula esinokuba yimagnethi emnandi kwifriji.
Kweli nqaku sikubonisa indlela yokwenza ibhedi yekati eyenziwe ngomthi elula kwaye elula kunye nebhokisi yeziqhamo elula. Inkulu isilwanyana sethu.
Ibhukumaka yokufunda kweKrisimesi
Into ye-DIY yokuhombisa incwadi. Kwinqaku sibonisa indlela entle yokwenza ibhukumaka ebhalwe igama lakho ngokukodwa elinikezelwe kumfundi.
Izisongeli zegalikhi kunye netswele
Kweli nqaku sikufundisa ukuba ungazisonga njani izipho zeKrisimesi ngezinto ezisetyenzisiweyo ezinjengesongelo begalikhi kunye namatswele. Ingcinga entle.
Ingelosi encinci yeKrisimesi enebhokisi yematshisi
Kule nqaku sikubonisa ukuba ngebhokisi elula yematshisi singenza njani ingelosi encinci yeKrisimesi emthini okanye kumfanekiso wokuzalwa.
Imihlobiso yomthi weKrisimesi
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza imihombiso emihle yomthi weKrisimesi. Eminye imithi elula kakhulu enezinto eziphinde zasebenza kwakhona.
Iqhwa elenziwe ekhaya
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza i-snowball enhle eyenziwe ekhaya ngenxa yesithsaba esincinci seKrisimesi kunye nengqayi yeglasi. Isipho esikhethekileyo.
Namhlanje sikufundisa indlela yokwenza ikhephu elimnandi kunye neeplastikhi zeplastikhi kunye nezinto ezahlukeneyo ezinokuphinda zisetyenziselwe ukunika umnxeba weKrisimesi ekhaya.
Incwadi encinci enamaphepha
Kule nqaku sikufundisa ukuba ungayenza njani incwadi encinci enamaphepha njengesitshixo okanye ingqokelela yamashishini amancinci. Umdlalo owahluke kakhulu kuye.
Gcina iibhrashi zamalaphu
Kule nqaku sikubonisa indlela esiwasebenzisa ngayo amabhulukhwe e-pajama agugileyo ukwenza ilaphu elihle lokugcina iibrashi zethu.
Intambo yeplastikhi yentsimbi yee-headphone
Isifundo sendlela yokwenza intambo yentsimbi ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe ukuze singasoloko sinyanzela ii-headphone xa sifuna ukuzisebenzisa.
Yenza isiphawuli ngesicimi sepensile
Isifundo sendlela yokuphinda usebenzise kwakhona kwaye unike ubomi obutsha kwisiphelo sepensile ukwenza isiphawuli kunye nesitampu sazo zonke iintlobo zamaphepha.
Ukunyathela bubugcisa obuthandwa kakhulu ngabantwana, ke siphinda siwusebenzise kwakhona umqulu weteyipu yokuncamathelisa ukwenza ivili lokunyathela.
Iphazili eneentonga ze-ice cream
Kweli nqaku sikubonisa indlela yokuba abantwana bonwabe ngokwenza iphazili encinci eneentonga zomkhenkce, umbono owahlukileyo wokudlala.
Imisesane yinto yokuhombisa yezandla zabo bonke abantu basetyhini kunye namanye amadoda, ke namhlanje sikufundisa indlela yokwenza lula kakhulu ngamaqhosha.
I-coaster eyenziwe ngeethayile
Ubugcisa obukhawulezayo nobulula ukwenza ii-coasters ngokurisayikilisha iithayile.
Isimbo somtya weBhoho
Inqaku lendlela yokwenza isongo sesitayile se-boho ngentambo yomnqamlezo, isongo esenziwe ngokutsha sentsimbi, amaso ambalwa kunye neglu.
Yenza ipeni nge-CD
Isifundo sendlela yokuphinda uhlaziye usiba usebenzisa i-CD endala. Siza kusebenzisa iteyiphu ukuze ukusikwa kweCD kugqibelele kwaye siya kubambelela ebuhlanti
Kweli nqaku sikubonisa umdlalo omnandi esinokuthi senze kwakhona iibhotile zeplastiki zokwenza isling Bowling Bowling yabantwana.
Amanani okuqala oqobo abantwana
IMathematics ibaluleke kakhulu ekufundeni kwabantwana, ke namhlanje sikubonisa indlela yokwenza umdlalo ngamanani emathematika elityeni.
Ipeyinti yomqala weplanga
Kule nqaku sikubonisa umgexo omnandi owenziwe ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe. Ngezinye iibhola zomthi sinokwenza isixhobo esihle sokuhombisa.
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza oonopopi abahle abancinci endlwini kunye neziqwenga ezilula zekhadibhodi ezijikeleze indlu.
Isibane esenziwe ngebhotile yeplastiki ehlaziyiweyo
Isifundo (DIY) sendlela yokwenza isibane ngokwenza ntsha kwakhona ibhotile yeplastiki kunye nokusebenzisa ipeyinti yokutshiza, isiphatho sesibane kunye nesiciko secookie.
I-DIY: umnini we-napkin ngesitya seplastiki
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungazisebenzisa njani izikhongozeli zeplastiki ukwenza into eluncedo ngazo, ezinje ngesiphatho esimnandi se-napkin.
DIY: hippy bag
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza ibhegi enesitayile kunye noyilo lwehippy ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe ezinje ngeebhulukhwe ezibanzi zehippy.
I-DIY: Ukuhonjiswa kwebhokisi yezihlangu
Kule nqaku sikubonisa indlela yala maxesha kunye nesitayile yokusebenzisa ibhokisi yezihlangu ukwenza into entle yokuhombisa.
I-DIY: Hombisa iibhotile nge-washitape
I-DIY esibonisa umbono wokuphinda usebenzise iibhotile zeglasi, ubanike umsebenzi omtsha, kwaye ubahombise nge-washitape.
I-DIY: Isiphathi seNapkin ngephepha langasese
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza umnini we-napkin obukekayo ngephepha elilula. Ke, uya kuyihombisa itafile yakho ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe.
I-DIY: Abanini beekhandlela zokurisayikilisha iibhotile
I-DIY ngendlela yokwenza umnini wekhandlela usebenzisa ucingo lwealuminium kunye neebhotile. Ukongeza, kulula kakhulu ukwenza ngokwezifiso ukuthanda kwethu kunye neepende ezimbalwa
Kule nqaku sinika indlela elungileyo yokusebenzisa iifoto ezindala ukuze sikwazi ukuzibonisa ngendlela ekhethekileyo kuyo nayiphi na ikona yendlu.
Iibhokisi ezinamaphepha asongiweyo
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza iibhokisi ezintle kunye ezilula ngephepha elisongiweyo. Ke, siya kuba nendawo yokugcina iigugu zethu ezincinci.
Phinda usebenzise isondo elide kwaye ulinike inkangeleko entsha
Inqaku malunga nendlela yokusika isiketi eside ngesitayile esitsha, ushiye indawo yangaphambili imfutshane kwaye uchaze indawo yangasemva ixesha elide ngololiwe.
Indlela yokusika isikipa senkwenkwe
I-DIY ngendlela yokwenza i-t-shirt yenkwenkwe yolwandle. Kweli nqaku siza kufunda ngendlela yokuphinda usebenzise i-t-shirt kwaye uyisebenzise kwakhona xa indala
Yenza ipensile yakho ngokwezifiso
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungazisebenzisa njani iipensile zakho ukuze uzinike ukulungiswa okufanelekileyo ukuze uzisebenzise kwakhona kwaye uzenze zoqobo.
Kule nqaku sikufundisa indlela yokwenza ulonwabo kunye nemaracas ezintle zabantwana, kuba bayathanda ukwenza ingxolo ngayo nantoni na.
Ingxowa yokubuyela esikolweni
Kweli nqaku sikubonisa ukuba ukhawulezisa njani kwaye kulula ukwenza ibhegi entle yabancinci ebuyela esikolweni isidlo sakusasa.
I-DIY: IMaracas eneeKhapsuli zekofu
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani into yokudlala yokukhuthaza ukuva kweentsana. Ii-maracas ezimbalwa ezinee-capsule zekofu ezilahlwayo ezimbalwa.
I-DIY: IiDomino ezinamatye
Kule nqaku senza i-domino eyonwabisayo yabantwana eyenziwe ngamatye aselwandle. Ke, sibafundisa ukuba indalo isivumela ukuba senze iithoyi ngayo.
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza into yokudlala ekhethekileyo kwisilwanyana sakho sasekhaya. Ibhola yoboya oza kuyikhupha kwaye udlale uyileqa ujikeleze indlu.
I-DIY: Ukuhombisa iibhokisi zekhadibhodi
Kule nqaku sikufundisa indlela yokuhombisa ezinye iikhadibhodi ukugcina ezo zinto zincinci okanye izinto zokuhombisa esinazo ekhaya kwaye asixoki.
I-DIY: Yenza iziqeshana zesikolo zakho ngokwezifiso
Kule nqaku siza kubuyela kwisikolo esikufutshane senza ubugcisa obulula ngokwezifiso iziqeshana eziqhelekileyo zokubamba iifoli.
Umhombiso wetreyi onee gomethi
Kule nqaku sikubonisa indlela yokuhombisa itreyi emhlophe elula kunye nezincamathelisi ezimbalwa ezilula. Uluvo loqobo kunye nolwesibindi.
Iitshokhwe ezenziwe ekhaya
Kule nqaku sikufundisa indlela yokwenza iitshokho ezizodwa ekhaya ukuze abantwana babe nezinto zokupenda ezitalatweni.
Intyatyambo ngebhotile yeplastiki
Kweli nqaku sikubonisa indlela yokwenza intyatyambo entle ngokurisayikilisha iibhotile zeplastiki. Hombisa ikhaya lakho ngolu hlobo lobuchule obulula.
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani iphazili yehagu yepepa emnandi ngentonga ezimbalwa zepopsicle. Ngale ndlela, sikhuthaza ukucinga.
Amaqweqwe eencwadi ahonjisiweyo
Kweli nqaku sikubonisa indlela yokuhombisa amaqweqwe eencwadi zakho ngamalaphu asebenza ngokulula. Ke, ziya kujongeka zitsala ngakumbi.
Kule nqaku sikufundisa indlela yokukhanyisa igadi yakho ngendalo ngeembiza ezintle ezinje ngakwimo yendlu yokukhanya.
Ihempe ziyaguga njengoko iminyaka ihamba. Ewe, namhlanje sisebenzisa ithuba lalo ngokwenza eminye imiqamelo emyoli.
Itafile yebhola ekhatywayo yekhadibhodi
Kule nqaku sikufundisa indlela yokwenza into yokudlala yabantwana. Itafile yebhola ekhatywayo eyenziwe ngabo ukuze baxabise iithoyi kwaye bazithande zinjalo.
Iingqayi zeentyatyambo ezineebhotile kunye neepelethi
Kule nqaku sikunika umbono omnandi wokwenza ulwakhiwo olukhulu lweembiza. Ke, iipatiyo ziya kujongeka njengangoku kwaye zintle.
I-DIY: ikhava elula
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza isiciko esisebenzayo sokukhanya. Isixhobo sokuguqula ukukhanya sibe yinto entle.
I-DIY: Isacholo samatye elwandle
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza isacholo esihle ngamatye aselunxwemeni. Ubugcisa obuhle ehlotyeni.
I-DIY: iingqayi zeglasi ezifakwe uboya
Iingqayi zeglasi zizinto eziyimfuneko ekhitshini. Ke namhlanje sikufundisa ukuba uyihombise ngoboya bemibala eyahlukeneyo.
Bhrasha ibhokhwe ecocekileyo
Kweli nqaku, sikwazisa ngembiza yesinyithi ukucoca iibrashi zomsebenzi wobugcisa emva kobugcisa. Ke, i-bristles ayizukugoba.
Ibhedi yoDoli enekhadibhodi
Kule nqaku sikubonisa ibhedi enkulu yoonodoli abenziwe ngekhadibhodi. Ngale ndlela, abantwana baya kuba neebhedi zabo ezihlaziyiweyo zoonodoli babo.
Isipaji selaphu esenziwe ngokutsha
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza isikhwama somtsalane esinelaphu elenziwe ngokutsha. Ilungele amantombazana akhangela izixhobo ezahlukeneyo nezentsusa.
I-DIY: Ibhola yeTennis njengendawo yokuhlala
I-DIY ngendlela yokwenza i-hanger ibhola yethenisi. .
I-DIY: ukuhombisa iingqayi zamasoni ngentambo
Kule nqaku sikubonisa indlela yokwenza umhombiso ngeengqayi zeglasi ezisongelwe ngentambo yaselwandle. Ukunika into eyahlukileyo ekhitshini.
I-DIY: ifowuni eneekomityi zeyogathi
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani into yokudlala eyonwabisayo yabantwana ngokubuyisela iikomityi zeyogathi. Indlela yokufundisa ukurisayikilisha ngendlela eyonwabisayo.
Ilanga elishushu lenja eshushu kunye nembiza ye-pringles
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani i-oven yenja eshushu kodwa esebenzayo kunye nembiza ye-pringles. Ukuveliswa kwezinto ezintsha kunye nokungaqhelekanga.
Kweli nqaku sikubonisa ezinye zeentlanzi ezonwabisayo ngeziqwenga zamalaphu.Umsebenzi wobugcisa omnandi wokwenza nabantwana kunye nemini elungileyo.
Inkqubo yeepatchwork ibhegi yangasese
Kweli nqaku sikubonisa ukuba ungayenza njani ibhegi entle yokwenza into yokugcina into oyigcinileyo.Ngobuchule beepatchwork buza kuba buhle.
Indawo yokuhlala kunye nezithinteli zekhokho
Kule nqaku sikubonisa indlela yokuphinda usebenzise kwakhona ii-corks kwiibhotile ukwenza indawo entle entle yezihlandlo ezizodwa.
Umnini wekhandlela ngeglasi yeyogathi indebe
Kule nqaku sikubonisa ubugcisa obupholileyo bokwenza nabantwana. Abanye abaphethe ikhandlela ngeglasi yeglasi yeyogathi, okusulungekileyo kunye nokurisayikilisha kwakhona.